Shina: Fanaovana Tsindry Hazo Lena Olona Nitatitra Fisiana Fandikan-dalàna Iray Mba Hilaza Ny Loharanom-baovaony	Voadika ny 24 Febroary 2013 4:09 GMT
Zarao: Manao tsindry hazolena amin'i Zhu Ruifeng ny mpitandro ny filaminana ao Chongqing , ilay vavolombelon'ny fisian'ilay horonan-tsary mirakitra ilay tantara ratsinà resaka firaisana ara-nofo mba honolorany ny orizinalin'ireo horonan-tsary miisa 7 ireo mahavoarohirohy manampahefana miisa iraika ambinin'ny folo ao amin'ny governemanta. Milaza ny mpitandro ny filaminana fa ilain'izy ireo ny orizinaly mba hahafahan'izy ireo manatanteraka fikarohana mahaleotena mifandraika amin'ireo horonantsary ireo; fa nivaky i Zhu [zh] fa ny sasany amin'ireo horonantsary ireo dia nomenà mpanome vaovao tsy nitonona anarana ho azy an-tànana, io olona io no namoaka ny vaovao avy ao amin'ny biraon'ny mpitandro ny filaminana ao Chongqing. Mino izy fa ny tanjon'io “fikarohana” atao io dia ny mba hahafantarana ny fototra niaingan'izany.
Fitantanam-pitondranaLalànaMedia sy Fanoratan-gazetyMediam-bahoaka